UDonald Trump angahlehlisa inqubomgomo yakhe yesimo sezulu! | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sibhale kwiMeteorology Network ngokuhoxa kweMelika ekuzibophezeleni ekubhekaneni nokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni ... Namuhla sizobhala ukuthi lesi simo singashintsha kanjani! Futhi kungukuthi izolo u-Emmanuel Macron, umongameli waseFrance, ukuvezile engxoxweni eyashicilelwa. UDonald Trump, umongameli wase-USA, umtshele ngesikhathi esanda kuvakashela eParis ukuthi Uzozama ukuthola isisombululo sokuhoxiswa kwezwe lakhe esivumelwaneni.
UMacron wayefuna ukukubeka kucace lokho mayelana neTrump "Sesiqalile ukwakha ubudlelwano bokuthembana kuzo zonke izingqinamba zamasu, kubandakanya nokungaboni ngaso linye kwethu." Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, phakathi kwalokhu futhi kuvela ukungavumelani nokwenqatshwa okwaboniswa nguTrump mayelana nezivumelwano cishe zazo zonke izizwe zomhlaba, zokubhekana nezinkinga ezihlobene nesimo sezulu. UMacron uchaze ukuthi uDonald Trump wamuzwa kanjani ngokuxhumana phakathi kobuphekula nokuguquka kwesimo sezulu. Ukuqinisekisile lokho wakuqonda okushiwo yizenzo zakhe futhi uTrump waphawula ukuthi uzozama ukuthola isixazululo ezinyangeni ezimbalwa ezizayo.
1 UTrump uqala ukuqaphela inkinga
2 UMacron ukhipha isifuba sakhe kulo mdlalo
UTrump uqala ukuqaphela inkinga
U-Emmanuel Macron uqhubeke wachaza, mayelana nokuthi kungenzeka yini ukuthi uTrump ukufakazele. Iminyakazo emadolobheni ezwe lakini, ngamabhizinisi, nasemvelweni wakho ukuze ungalahli impi elwa nokuguquka kwesimo sezulu. UMacron uqhubeke wachaza mayelana ukubaluleka kokugcina inkhulumomphendvulwano noTrump. Kungukhiye ukuthi i-United States ihlanganise umkhakha wokulwa nokushisa komhlaba. Kufanele uzibandakanye nokuguquguquka okuhlukahlukene.
Ngemuva kwesithangami nabezindaba ngoLwesine olwedlule, uTrump wathi kukhona okungenzeka, maqondana nesikhundla sakhe sakamuva. Unikeze ukuphawula obe nezincazelo ezahlukahlukene. Sizobona ukuthi kwenzekani, kepha sizokhuluma uma isikhathi sifika. Uma kwenzeka okuthile kungaba kuhle, futhi uma kungenzeki lutho kuzolunga nakho ».
UMacron ukhipha isifuba sakhe kulo mdlalo
U-Emmanuel wayefuna ukusebenzisa lolu hambo ukukhombisa isithombe esiqinile seParis neFrance. Uqinisekile ukuthi isithombe sikaTrump seFrance manje sesishintshile saba ngcono futhi sihle. Uchaza ukuthi ngendlela yingakho akhethe indawo yokudlela ephezulu e-Eiffel Tower ukummemela esidlweni sakusihlwa, njengoba kwenza unkosikazi wakhe, ngoLwesine ebusuku.
Ngemuva kwalo mhlangano wokugcina ogcwele ithemba nezitatimende zakamuva zikaMacron, inkohliso yokuthi kukhona okuhle okungagcina kwenzekile, kubhebhethekise kakhulu imimoya.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » UDonald Trump angahlehlisa inqubomgomo yakhe yesimo sezulu!